Kedu ihe na-akụ? Na Jargon ndị ọzọ | Martech Zone
Izu gara aga m wepụrụ ụbọchị ọrụ ma gaa Ọkara Weebụ, ogbako mpaghara na Teknụzụ Ntanetị. Ọ bụ ezie na m bụ ọkà okwu nọọrọ onwe m (na ịde blọgụ), amụtara m ọtụtụ ihe banyere ebe na-abụghị bailiwick m. Ihe ịga nke ọma m na ịde blọgụ bụ n'ihi oke agụụ na nnukwu nkà na ụzụ. Gingde blọgụ chọrọ ka m bụrụ jaak nke azụmaahịa niile mana ọ nweghị nke ọ bụla. Nzukọ dị ka nke a na-enyere m aka imeziwanye nkà m n'akụkụ ndị na-adịghị ike!
Otu n'ime nnọkọ ndị m nwere mmasị na ya bụ na Nchịkọta Weebụ. Ahụtụbeghị m ya na mbụ, mana okwu ahụ bụ 'kụrụ' na-anwụ n'ezie n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Mgbe ndị mmadụ na-ajụ m ole 'hits' m nwetara, ana m aza ya na ọnụ ọgụgụ 'ọbịbịa m pụrụ iche', ọ bụghị ọnụ ọgụgụ n'ezie. Amaghị m ole ihe m nwetara. Nke a gbagwojuru ọtụtụ ndị ọchụnta ego azụmaahịa gara ogbako ahụ anya - ha na-anụkwa 'kụrụ' ọtụtụ afọ. Echere m na ka ị na-arịgo elu n'ọkwá ahụ site na teknụzụ ma banye na ụlọ ụlọ, 'hits' ka bụ okwu nkịtị. Nke ahụ kwesịrị ịgbanwe.
A 'kụrụ' bụ n'ezie a na-abaghị uru (dị ka energetically kọwara site na Web Analytics pro, Julie Hunter, na kwuru). Hits na-ezo aka n'ụzọ nkịtị ka ọtụtụ arịrịọ si sava gị. N'ime oge dị mma, nke a bụ nnukwu mmụba ebe ọ bụ na ibe weebụ na-abụkarị otu nnwere onwe. N'otu oge, ihe oyiyi bụ ihe dị iche, ọ bụghị iwu. Rịọ web peeji nke gosipụtara otu ibe weebụ zuru oke. Nke ahụ abụghị ikpe ọzọ.
Ihe nchịkọta nchịkọta bụ Downplaying Hits
Banye na ngwungwu nchịkọta gị kachasị amasị gị (Google Analytics na Clicky na-amasị m) ma ị gaghị ahụ 'hits' ebe ọ bụla. Obi dị m ụtọ, ndị ọkachamara na Analytics na-emesịa na-elebara metrik kachasị mkpa anya. Clicky na-agbakwụnye ọnụ ọgụgụ ndepụta gị site na Feedburner API gị akuko!
Lee usoro igodo ọrụ iji lelee maka Weebụ Web gị:
Mmegharị peeji - Nnyocha peeji bụ ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ibe zuru oke nke a na-agbanye na nleta niile na n'ime oge ị na-atụ.
Ibe akwukwo obula - Nnyocha peeji dị mkpa mgbe ị na-ele anya ọtụtụ ndị ọbịa gị. Ndị ọbịa 7 na nlele peeji 7? Nke ahụ pụtara na onye ọbịa ọ bụla gụrụ naanị otu peeji. Dịka onye na - ede blọgụ, ihe ndị m na - enyocha dị obere karịa ka m ga - achọ, yabụ inyocha ha enweghị isi. Nnukwu ọdịnaya na ijikọ n'etiti posts ga-eme ka ndị ọbịa nọrọ ma ọ bụ dọta ha na ọkwa ndị ọzọ. You'll ga-ahụ ọtụtụ njikọta n'ime posts m yana som guzobere posts na m sidebar… ndị ahụ nọ ebe ahụ iji gbalịa idobe ndị mmadụ gburugburu. Ka ha na-arapara n'ahụ, nke ka mma ka m na-eme!
Onu ahia ohuru - N'ime onye ọ bụla na-eleta ebe nrụọrụ weebụ gị, nke a bụ ngụkọta nke ndị na-agatụbeghị na usoro pasent. Na-amasị m na-anya na ọnụ ọgụgụ a dị ka nke ọma… dị ka ogologo dị ka m nwere ike ịnọgide na-enwe m ẹdude ọbịa na inupụ ọhụrụ, na pụtara na m na-retaining na-agụ akwụkwọ na-eto eto.
Ọnụ Ụgwọ - Ndị a bụ ndị folks na-eleta saịtị gị ma gbapụta ya. Nke a pụtara na ha anaghị achọta ihe ha na-achọ. Lelee anya na nke a… ọ nwere ike bụrụ na ị na-edezighị aha edezi maka ọdịnaya gị ma ọ bụ ọdịnaya gị na-esi isi. Gbaa mbọ hụ na ị buliri ihe ị bụ wee wee rapara na ya. Nke ahụ ga - eme ndị mmadụ.
Nkezi oge na saịtị - Dị ka Peeji nke ọ bụla na nleta, ka ọ na - akawanye mma, nri? Maka m, n'aka. Agbanyeghị, maka weebụsaịtị ebe m na-ere ihe, nke a nwere ike ịpụta na saịtị m bụ ihe mgbu na butt ịnyagharịa na m kwesịrị ịrụ ọrụ ụfọdụ. Ime ka ndị mmadụ na-agagharị na saịtị gị n'enweghị nsogbu nwere ike ịbawanye oge gị na saịtị, mana ha agaghị alaghachi.
Mgbanwe - n'ime ụwa ecommerce, 'ntụgharị' na-abụkarị ịzụta. Ọ pụtara na ha bịara, ha chọtara, ha zụtara! Maka blọọgụ dịka nke m, ọ nwere ike ịpụta na ha pịrị aka na mgbasa ozi, rịọ maka itinye aka na-ekwu okwu, ma ọ bụ budata mpempe akwụkwọ. Kedu ihe mgbaru ọsọ nke blog gị ma ọ bụ weebụsaịtị? You na-atụ aro nke ahụ dịka ntụgharị? I kwesiri ibu! N'ime nchịkọta nchịkọta, a na-atụgharị ntụgharị site na ịtinye 'Ihe Mgbaru ọsọ' na saịtị gị na ngwugwu nchịkọta na ụfọdụ koodu akọwapụtara na peeji nke nkwenye gị. (ntụgharị. Daalụ maka nbudata!). Ọ bụghị mgbe ihe kacha mfe ime do Seth kwenyere.
Ma n'ezie, oburu na inwetaghi ya - gbaa mbọ kwụsị Ọkara Weebụ! Ederede sitere na ezigbo mkparịta ụka mụ na ezigbo enyi m nwere, JD Walton na blog BlackinBusiness. Ana m agbalị ịbụ ezigbo onye nchịkwa JD - mana ọ na-amụta ihe a ngwa ngwa karịa ka m nwere ike ịtụkwasị ya! Enweela m JD na Google Analytics kemgbe mmalite blog ya, mana ọ dị njikere ịmalite nyocha stats nke ya ugbua!
Tags: usoro nyochaokwu nyochankezi oge na saịtịụba ọnụegomgbanweseeọhụụ ọhụụpeeji nke kwa nletapeeji nkeNdị ọbịa pụrụ ichendị ọbịa
Mee 15, 2007 na 11: 57 AM
Doug, ị nọ n'elu 3000 n'ụwa, 2200 na mgbanwe. Enwere m obi uto na ịnwere gị dị ka onye nchịkwa. Emeela m ka isiokwu m saa mbara ka obodo dị iche iche nwee ike irite uru na ahụmịhe azụmaahịa m gụnyere nke ịbụ VP Global maka ahịa na ahịa. Ike gị na ọgụgụ isi na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ naanị site na nghọta gị banyere blọọgụ site na ọnọdụ dị mma na nke dabara. Have mara etu nke ahụ ga - esi nyere ndị mmadụ aka ịzụ ahịa na azụmaahịa na - eto eto na uru. Border gbara na ọgụgụ isi
Mee 15, 2007 na 3: 43 PM
M na-ejedebe na ọgụgụ isi, ma ọ dị mwute ikwu, achọtara m onwe m na ogbi n'akụkụ oke! Daalụ JD! Are na-ejupụta oge agbamume na ezigbo onye ndụmọdụ!
Mee 25, 2007 na 9: 55 AM
Dị umeala n’obi nke ukwuu,
Mee 28, 2007 na 9: 55 PM
Ndewo Daalụ maka edemede a iji kpochapụ ụfọdụ Kedu? Adị m ọhụrụ n'akụkụ a nke Web m na-agakarị na-agagharị mana ugbu a, abụ m onye nchịkwa wannabe na-agba saịtị saịtị arcade abụọ iji mebie onwe m maka nnukwu ihe. Kedu ihe mmụta mmụta !!